Momba anay - Nanchang Qinglin Seat Manufacturing Co., Ltd.
Nanchang Qinglin Automobile Accessories Co., Ltd.dia mpanamboatra seza matihanina manana traikefa efa an-taonany. Ny vokatray lehibe indrindra dia ny seha-pambolena, seza fananganana, seza zaridaina ary ny faritra hafa amin'ny fiara.
KL Seating dia natsangana tamin'ny taona 2001 miaraka amin'ny velarany 26000 metatra toradroa. Manana toby famokarana roa izahay: Nanchang, Jiangxi ary Yangzhou, Jiangsu. Miaraka amin'ny mpiasa ampy fahaizana, KL Seating dia manana fahaizana mamokatra seza 400.000 pcs isan-taona.
Manana rafitra fitantanana tonga lafatra sy ekipa R&D tena tsara izahay. Ny vokatray rehetra dia nandalo ISO9001: 2015, CE ary PAHS taratasy fanamarinana. Ny vokatray dia ho an'ny OEM ao an-toerana sy any ivelany any ivelany, toa an'i Eoropa, Amerika, Aostralia, Azia atsimo, sns.
Miaraka amin'ny Principe Enterprise an'ny mpanjifa voalohany, ny asan'ny ekipa, ny serivisy tsara indrindra, ny seza KL dia hanao izay farany vitany mba hanomezana seza azo antoka sy azo antoka, miezaka ny ho mpamorona seza sy mpanamboatra seza eran-tany.
Omeo seza azo antoka, ahazoana aina ary ara-toekarena ny mpanjifa amin'ny fahaizantsika matihanina.
Ho mpamorona seza manerantany sy mpanamboatra.
Ny mpanjifa aloha, ny fiaraha-miasa, ny fanavaozana, ny fitiavana, ny tsy fivadihana, ny fanoloran-tena
Seza Traktera Metal, Lozam-tratra seza traktera, Toeram-pitrandrahana bozaka fanoloana, Seza traktera fambolena, Seza mpamily kamiao, Seza Traktera Universal Universal,